Waa kumaa maalqabeenka Malaayiinta doolar ugu deeqay jaamacadda Oxford ? | Saxil News Network
Waa kumaa maalqabeenka Malaayiinta doolar ugu deeqay jaamacadda Oxford ?
June 19, 2019 - Written by editor
Image captionStephen Schwarzman iyo ku xigeenka hormuudka jaamacadda Oxford Prof Louise Richardson
Jaamacadda Oxford ee ku taalla dalka Ingiriiska UK ayaa aqbashay deeq lacageed oo aad u badan si ay u samayso machad cusub oo lagu barto anshaxa caqliga macmalka ah, waa dhaqaalihii ugu badnaa ee mar qura wada socda ee abid loogu deeqo jaamacad dalkaas ku taalla.
Stephen Schwarzman oo ah nin Maraykan ah oo bilyoneer ah ayaa jaamacadda siiyay 150 milyan oo giniga istarliinka ah, ninkaas ayaa lataliyeyaal u soo noqday madaxweyneyaal Maraykan ah oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuwaas oo uu ku jiro Donald Trump.
Dhisme cusub oo lagu baranayo culuunta banii’adaminimada ayuu machadkaasi hoy u noqon doonaa.
Dawladda Ingiriiska ayaa sheegtay in arrintani ay tahay maalgalin Britain lagu sameeyay “oo ahmiyad leh isla markaasna caalami ah”.
Bilyaneer been abuur ah oo dadka wareeriyay
Sida warqad luntay ay nin ugu horseedday inuu noqdo bilyaneer
Image captionMaalqabeen Stephen Schwarzman iyo Madaxwayne Trump
Dhaqaala la’aan haysata jaamaacadaha
Iyadoo lagu jiro wakhti ay jaamacaduhu wajahayaan hubaanti la’aan marka ay timaado maalgalinta cilmi baarista sababtuna ay tahay ka bixitaanka Britain ee Midawga Yurub ayay arrintan kabid dhaqaale oo baaxad leh u noqonaysa jaamacadda Oxford.
Mudane Schwarzman oo ah madaxa shirkadda gaarka loo leeyahay ee Blackstone ayaa ah mid ka mid ah bilyaneerrada ugu caansan Maraykanka.
Wakhtiyadii hore qaab nololeedkiisa oo ay dhaqaale badan ku baxdo ayaa dhaleecayn soo jiitay, balse wakhtiyadan dambe wuxuu noqday nin aad u gacan qabta waxbarashada.
Deeqdan la siiyay jaamacadda Oxford ayaa ku soo beegmaysa xilli bilyan-neerka lagu magacaabo David Harding uu jaamacadda Cambridge ugu deeqay lacag dhan £100m oo ah lacagta Ingriiska.
Waa kumaa Schwarzman?
Mr Schwarzman waa maalqabeen u dhashay Mareykanka waxa uuna inta badan ku dhiiradaa maalgalinta mashaariic kala duwan.
Mr Schwarzman, waa 72 jir ku dhashay Pennsylvania, waana gudoomiyaha iyo asaasaha is shirkadda Blackstone, oo ka mid shirkadaha ugu waawayn ee dhanka maalgashiga.
Shirkaddan ayuu asaasay sanadii 1985, waxaana hantidiisa lagu qiyaasay 2018-ddii 12.4 bilyan oo doolar.
Mr Schwarzman ayaa sanadii 2018 waxa uu bishii October lacag dhan $350 milyan oo doolar ugu deeqay MIT, oo asaastay kolejka MIT Schwarzman College.
Stephen Schwarzman ayaa sidoo klae aan ka marnayn dhanka siyaasadda Mareykanka waxaa uuna la taliyo u ahaa dhowr musharax oo madaxwayne oo xisbiga Jamhuuriga ah oo uu ka mid yahay madaxwayne Trump.